Mitaky Ny Rariny Ho An’i Zainab, Ankizivavy 7 Taona Voaolana sy Novoina ho Faty Tao Kasur ny Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2018 6:55 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, اردو, Italiano, नेपाली, ਪੰਜਾਬੀ, English
Mahatonga ny vahoaka ao Pakistan hangataka fitsarana haingana sy sazy sahaza ho an'ny nahavita heloka ny fakàna an-keriny, fanolanana sy famonoana zazavavy iray fito taona.
Hita tao anaty fanariam-pako tamin'ny 9 Janoary tao amin'ny distrikan'i Kasur ao amin'ny faritanin'i Punjab i Zainab Ansari, efatra andro taorian'ny fakàna azy an-keriny. Milaza ny tatitra tamin'ny fandidiam-paty fa nokendaina ho faty ity zaza tsy ampy taona rehefa avy naolana.
Niteraka fifandonana tao Kasur ny vaovao ka olona roa farafahakeliny no namoy ny ainy ary maro no naratra satria nitifitra basy ny polisy mba hanaparitahana ireo mpanao hetsi-panoherana feno hatezerana mitaky ny fisamborana tsy misy hatak'andro an'ilay mpanolana sy mpamono olona, izay mbola mirenireny.
Niteraka fihetseham-po teo amin'ireo Pakistaney avokoa ny lahatsarin'ny fihetsiketsehana feno herisetra tao Kasur, polisy nitifitra mpanao fihetsiketsehana, resadresaka mampihetsi-po nifanaovana tamin”ny ray aman-drenin'i Zainab, ary lahatsary CCTV navoaka ho an'ny daholobe izay mampiseho an'i Zainab tarihan'ny lehilahy iray tsy fantatra.
Fa inona no nahatonga ny olona hikomy tamin'ny voalohany? Manazava ny antony ilay mpamakafaka sady bilaogera Moeed Pirzada, manoratra ao amin'ny Global Village Space, tranokalam-baovao mampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra sy ny fahatakarana:
Zainab no tranga faha-12 momba ny fanolanana sy famonoana nitranga tao anatin'ny taona tao Kasur. Toerana nahitana fikambanan-dratsy mpanao sary vetaveta ankizy tamin'ny taona 2015 ihany koa ny distrika; fampahatsiahivana mampalahelo momba ny fahantran'ireo ankizy efa ho 300, eo anelanelan'ny 10 sy 15 taona, izay niharan'ny fanararaotana ara-nofo sy fakàna sary vetaveta ny raharaha Zainab.
Zainab’s last homework. #JusticeforZainabpic.twitter.com/XSk26Qbjv7
Miharatsy ny toe-draharaha noho ny tsy fisian'ny fahavononana ara-politika mba hiaro ny ankizy, ny tsy fisian'ny fahavononana eo anivon'ny fiarahamonina mba hampianatra momba ny ara-nofo sy ny fampianarana momba ny fahalalana fiainana ho an'ny ankizy, sy ny fankahalana vehivavy ao Pakistan.
Zava-dehibe ny fiheverana ireo tranga ireo, saingy ny zavatra manan-danja indrindra dia ny fanohanana izany fiheverana izany mba hiova ny toe-draharaha amin'ny farany, araka ny lazain'ity mpiantsehatra sady mpikatroka Hamza Ali Abbasi tao amin'ny Facebook hoe:
Na dia nitarika fihetsiketsehana feno hatezerana teny an-dalambe aza ny tantara, mpisera media sosialy maherin'ny dimy hetsy no nampiasa ny #JusticeForZainab.
Mpikatroka ho an'ny antoko mpanohitra Pakistaney Awami Tehreek (PAT) no nampiasa voalohany ny tenirohy, saingy vetivety dia nalain'ireo olon-tsotra ary nanomboka nalaza erak'izao tontolo izao rehefa namono mpanao fihetsiketsehana roa ny polisy.
“Talk about sexual abuse – Break the taboo” Students, teachers, media persons and activists all gathered today at Karachi Press Club demanding protection for children through awareness and strict implementation of laws. #JusticeForZainab#JusticeForFaizan#JusticeForAllChildrenpic.twitter.com/DCRBhn7HDB
Tokony ho famoretana manerana ny firenena ho an'ireo mpametaveta ara-nofo ny #JusticeforZainab. Mila miaro ny zanatsika rehetra tsy ho tratran'ny herisetra isika. Mila programa fanabeazana, hetsika fanentanana, fandaharan'asan'ny polisy, sazy henjana, laharana an-tariby hifanampiana-NY ASA! Tokony hanamarika ny fiovan'ny firenentsika ny fahafatesany!
Raha nifantoka lalina tamin'ny raharaha Zainab ny sain'ny vahoaka, tao Dijkot, tananan'i Faisalabad ao Punjab, hita tao an-tsaha ny fatin'i Faizan, tovolahy 15 taona. Novetavetaina ihany koa izy ary avy eo novonoina.
Nanohitra ny fanararaotana ara-nofo i India, mpifanolo-bodirindrina taorian'ny raharaha fanolanana nataona jiolahimboto tao Delhi tamin'ny taona 2012. Hitondra fiovana ve ny fanolanana sy ny famonoana an'i Zainab rehefa vonona hiaro ny zanany ihany i Pakistan nony farany? Ho hitantsika eo izany.